UPDATE: Ciidamada dalka Turkiga oo soo qab-qabtay tahriibayaal badan oo ay ku jiraan Soomaali, halkeese la geeyay? | HalQaran.com
UPDATE: Ciidamada dalka Turkiga oo soo qab-qabtay tahriibayaal badan oo ay ku jiraan Soomaali, halkeese la geeyay?
Turkey (Halqaran.com) – Ciidamada Illaalada Xeebaha dalka Turkiga ayaa gacanta ku dhigay tahriibayaal fara badan oo ay Soomaali ku jirto.
Dadka la qab qabtay waxaa ay tiradoodu gaareysaa 236 qof, kuwaas oo u kala dhashay dalalka kala ah.
Syria, Soomaaliya, Morroco, Bangladesh, Iraq, Afghanistan iyo Congo waxaa ay doonayeen in ay gaaraan Jaziiradda Gariigga ee Chios sida ay uga sii gudbaan Yurub.
Wararka ayaa sheegaya, in hawlgalkan uu ka dhacay Xeebaha Gobolka Galbeed ee Izmir, ee dalka Turkiga, waxaana muhaajiriintaas lagu hayaa xabsiyo ay leeyihiin Ciidamada Turkiga.
Warbixin ay soo saartay dowladda Turkiga ayaa waxaa ay ku sheegtay in sanadkan 2019 oo kaliya ay isku dayeen 28,546 qof in ay galaan Qaaradda Yurub iyaga oo maraya xeebaha dalka Turkiga.
Ugu dambeyn, dowladda Turkiga ayaa sanadkii 2016-kii Midowga Yurub kula heshiiyay xakameynta Muhaajiriinta, iyaguna ay bixiyaan qarashka lagu heynayo, hayeeshee Erdogan ayaa dhawaan ka digay in uu fasaxayo 3.6 Milyan oo qaxooti Syrian ah si ay u galaan Yurub.
Afghanistan iyo Congo
turkiga lagu qabtay